ပျံလွန်တော်မူပြီးတာတောင် မပုပ်မသိုးတဲ့ ကျိုက်ထီးဆောင်း ဆရာတော်ဘုရားကြီး…(လိုရာဆုတောင်းပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါ) – Myanmar
ပျံလွန်တော်မူပြီးတာတောင် မပုပ်မသိုးတဲ့ ကျိုက်ထီးဆောင်း ဆရာတော်ဘုရားကြီး…(လိုရာဆုတောင်းပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါ)
September 8, 2020 admin Knowledge 0
မပုပမွသိုးပဲ ယနေ့ အခှိနအွထိရှိနသေော ကှေးဇူးတောရွှငွ ကှိုကထွီးဆောငွး ဆရာတောဘွုရားကှီး ရုပကွလပဖွှဈပါတယွ …. သငယွနေ့ကံကောငွးခငှရွငွ ရှယပွါ လိုကလွုပပွါဒီ အခကှတွှလေိုကနွာနိုငပွှီဆိုရငတွော့ သင့အွတှကွ ငှကှေေး လာဘလွာဘကံပှင့ဖွို့ မဝေးတော့ဘူးလ့ို ပှောလို့ရပါပှီ။
အလုပမွရှိပဲနှင့တွော့ ငှကှေေးမှားမှား လိုခငှလွို့တော့မရဘူးပေါ့ဗှာ။ ကိုယ့ရွဲ့ပိတဆွိုနတေဲ့ ငှကှေေးကံမှား ရသင့လွှှကကွှန့ကွှာနသေော ငှကှေေးလာဘလွာဘမှားအပှငအွခှားသော နရောမှားမှလညွး ကိုယ့ရွဲ့ကံ နှင့ွ ကိုယ့ရွဲ့ သဒဒြါတရားပေါွ မူတညပွှီး ငှကှေေးလာဘလွာဘမှား ဝငလွာပါလိမ့မွယွ။
၂၄ရကပွှည့ပွှီးရငွ တဈပတနွားပှီး ကိုယ့မွှေးနေ့ရောကမွှ အဓိဌာနွ နောကတွဈကှိမပွှနဝွငရွပါမယွ။ ဂါထာတောွ… အရဟံဝတ လာဘံ ဟတေုပဈစယော အရဟံဝတ လာဘံ အရမမြဏပဈစယော အရဟံဝတ လာဘံ အဓိပတိပဈစယော အရဟံဝတ လာဘံ အနနတြရပဈစယော
အရဟံဝတ လာဘံ သမနန်တရပစ်စယော အရဟံဝတ လာဘံ သဟဇာတပစ်စယော အရဟံဝတ လာဘံ အညမညပစ်စယော အရဟံဝတ လာဘံ နိူယပစ်စယော အရဟံဝတ လာဘံ ဥပနိူယပစ်စယော အရဟံဝတ လာဘံ ပုရဇောတပစ်စယော အရဟံဝတ လာဘံ ပစ်ဆာဇာတပစ်စယောအရဟံဝတ လာဘံ အာသဝေနပစ်စယော အရဟံဝတ လာဘံ ကမ်မပစ်စယော အရဟံဝတ လာဘံ ဝိပါကပစ်စယော အရဟံဝတ လာဘံ အဟာရပစ်စယော အရဟံဝတ လာဘံ ဣန်ဒွိယပစ်စယော အရဟံဝတ
လာဘံ ဈာနပစ်စယော အရဟံဝတ လာဘံ မဂ်ဂပစ်စယော အရဟံဝတ လာဘံ သမ်ပယုတ်တပစ်စယော အရဟံဝတ လာဘံ ဝိပ်ပယုတ်တပစ်စယော အရဟံဝတ လာဘံ အတ်ထိပစ်စယော အရဟံဝတ လာဘံ နတ်ထိပစ်စယော အရဟံဝတ လာဘံ ဝိဂတပစ်စယော အရဟံဝတ လာဘံ အဝိဂတပစ်စယောတိ။ မနကျ ၉ခေါကျ ည ၉ခေါကျရှတျလညျးရပါတယျ။
ဂုဏတြောြ ပဌာနြးကငွ့စြဉမြိုလို့ အမှတဆြုံးတှကေို ပှားမွားရတာဖှဈလို့ လာဘလြာဘမမွှောကြိုးပဲ ကှညညြိုစိတဖြှင့ြ ရှတဆြိုပူဇောပြါက ပို၍ အကွိုးထူးခံစားရမှာဖှဈပါတယြ။
နိုင်ငံတကာက ထူးထူးဆန်ဆန်းနဲ. ရယ်ရတဲ့ Mask တပ်ကြပုံလေးတွေ
ဖုန်းဘက်ထရီကို ရက်အတော်ကြာအသုံးခံအောင် ဘယ်လိုထားရမလဲ?